I-tight ingafakwa uwonke wonke
AKUMELE ivele ngaphandle iLace trim short
ZANELE MTHETHWA | August 28, 2019
AGCWELE zonke izitolo zezingubo zabesifazane ama-tight agqokwa ngaphansi, abanye abawenzela ukuqoqa umzimba. Nokho kukhona abashaya eceleni uma sekumele bawagqoke, okwenza kugcine kungabukeki kahle. Kukhona nabacabanga ukuthi ngawabesifazane abondlekile emzimbeni kuphela kodwa umsiki wengqephu futhi ongumeluleki ngayo uNkk Mamsie Mkhwanazi we-Afrolicious Designs, uthe wonke umuntu uyayidinga i-itight.
“Wonke umuntu wesifazane uyayidinga i-tight ngoba kunezingubo zokugqoka ezibukeka kahle uma uzifake nayo. Kuyenzeka vele abayizidudla bayigqoke ngoba befuna kuqoqeke umzimba kodwa akusho ukuthi abangondlekile abayidingi. I-tight isiza kakhulu uma ugqoke ingubo ekhanyayo noma ekubambayo emzimbeni. Uma ugqoke i-tight kufihleka umthungo wephenti, kungabonakali lapho lihamba khona nokuma kwalo,” kuchaza uNkk Mkhwanazi.
Uthe kubalulekile nokuthola umbala ohambisana nengubo oyigqokile. Uveze ukuthi kunemibala ye-tight okungadingeki igqokwe, engayimosha iyiqede ingubo. Ulinganise nge-tight ebovu, athe ayibukeki kahle uma ugqoke izimpahla ezikhanyayo noma ezimhlophe.
“Ngikhuthaza ukuthi abantu bathenge emnyama ngoba yona ingena kunoma yimuphi umbala wezingubo. Kukhona nenombala ofana nesikhumba, nayo engabonakali engubeni uma usugqokile,” kusho uNkk Mkhwanazi.
Ukhuze nomkhuba wokuthi i-tight igqokwe nengubo noma isiketi esinomqhewu.
Uthe kubukeka kabi uma isilunguza ngaphansi komqhewu.
“Iqiniso lithi i-itight ifana nezimpahla zangaphansi, akumele ivele. Akhona ama-tight esiwabiza ngama-legging okuyiwona okumele avezwe ngaphandle,” kuchaza uNkk Mkhwanazi.
Uveze ukuthi zihlukene izinhlobo zama-tight yingakho kubalulekile ukuthi umuntu abuze esitolo ngaphambi kokuthenga i-tight efanelekile.
Nazi izinhlobo zama-tight nendlela yokuwagqoka:
* Bicycle shorts
Lawa ajwayele ukuba mafishane, agqokwa kakhulu ngabagibeli bamabhayisikili.
Uyakwazi ukuthi ujime ngayo kodwa ungayigqoka nangaphansi ngoba ibamba kahle umzimba. Ibonakala ngendwangu eshibilikayo necwebelezayo.
* Body shapers
Yakhelwe kuphela ukubamba izinqa nesisu futhi akumele ivezwe. Uyibona ngokuthi ibekwe nezimpahla zangaphansi esitolo. Kuyenzeka ibe nombala omnyama noma ofana nesikhumba. Indlela eyakhiwe ngayo inezikhwanyana endaweni yezinqa bese ibamba kakhulu esiswini.
* Lace Trim short
Ijwayele ukuba yindwangu ewusilika bese iba noleyisi ngezansi. Ungayigqoka nengubo ekhanyayo kodwa kubalulekile ukukhetha umbala ohambelana nengubo oyigqokile.
Uwabona ngokuthi abekwa ezimpahleni zokugqoka. Kuyenzeka abe nemibala ehlukene nezimbali kodwa indwangu iyaqina kunezinye izinhlobo. Ungakwazi ukuyi-gqoka nengubo emfishane noma ihembe elide.